Bangiga Adduunka oo $500M Yaboohay
Bankiga Adduunka ayaa $500 milyan u ballan qaaday gargaarka deg degga ah ee wax lagaga qabanayo abaarta iyo macluusha Geeska Afrika.
Bankiga Adduunka ayaa ballan qaaday inka badan $500 milyan doolar oo si deg deg ah loogu bixinayo gargaarka dadka ay abaaruhu saameeyeen ee Geeska Afrika.
Madaxa Bankiga Adduunka Robert Zoellick ayaa qoraal uu isniinta maanta ah soo saaray ku sheegay inay muhiim tahay “qaadista tallaabo deg deg ah oo hoos loogu dhigayo dhibaatada dadka haysa”.
Lacagtaasi uu ballan qaaday Bankiga waxaa lagu bixin doonaa mashaariic wakhti gaaban socda iyo kuwo wakhti fog socon doona, kuwaasoo laga fulin doono dalalka Bariga Africa, kuwaasoo kala ah Ethiopia, Djibouti, Kenya iyo Soomaaliya.
Qaramada Midoobay waxay sheegtay in inka badan 11 milyan oo ruux oo gobolkaasi ku sugan ay u baahan yihiin gargaar deg deg ah. Tobanaan kun oo qof ayaa gobolkaasi macluul ugu dhintay, kuwo badanna waxay la dhibtoonayaan nafaqa darri aad u daran.
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay waxaa sidoo kale looga warbixin doonaa macluusha dalka Soomaaliya, inta uu socdo kulan albaabada u xiran yihiin oo Isniinta maanta ah ka dhici doona magaalada New York.
Qaramada Midoobay waxay todobaadkii hore ku dhowaaqday inay macluul daran ka jirto gobollada Bakool iyo Shabeellaha Hoose, halkaasoo ay ka taliyaan kooxda al-Qaacida xiriirka la leh ee al-Shabaab.
Hay’adda Caafimaadka Adduunka ee WHO, ayaa iyana sheegtay in inka badan 5 gobol oo koonfurta Soomaaliya ku yaalla ay qarka u saaran yihiin macluul.